Top sitesconnection amin'ny vahiny languagesocial tambajotra sy ny chatsall an-tserasera antokony - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Mifototra amin'ny firaketana an-tsoratra tags izay mety ho tia no tena malaza.
Misy roa ny fomba fandoavam-bola hita ao anaty aterineto. Ny faharoa dia ny Kahie, izay misy amin'ny fiteny roa ary ahitana tsy mihoatra ny ampy. Paid content ahitana ny voafetra ny isan'ny fiteny niara, ary koa ny lahatsoratra miaraka amin'ny sary sy fanehoan-kevitra ao amin'ny endrika pdf. Inona no zava-dehibe amin'ny Lingq dia ny voambolana izay ho ampianarina ahitana fara-fahakeliny farafahakeliny teny vahiny fahaiza-manao:"ao amin'ny tambajotra sosialy, izay misy amin'ny fiteny - malagasy, frantsay, Japoney, soedoa, italiana, Sinoa sy ny alemaina - tamin'ny ny anio, vaovao rehetra ny teny mety ho mora voavonjy. Ankoatra izany, misy maimaim-poana ny fifandraisana sy ny fidirana ho amin'ny teny mpitari-dalana izay afaka manoratra ny hafatra.
Ity tranonkala ity dia hanampy anao hifandray tsara amin'ny fiteny.
Malagasy, Amerikana sy Britanika.
Ny afa-po ny toerana io dia ahitana ny monologues ary dinidinika miaraka amin'ny olo-malaza, anisan'izany ny lohahevitra teny fitaovana amin'ny lohahevitra vaovao isan'andro-poana ny lesona.
Isika tsy manao na fampanantenana eo amin'ny fanomanana ny tambajotra fa maro ny olona mampiasa.
Ho an'ireo izay tia, ny fitsipi-pitenenana asa fitoriana. Ny toerana dia fiteny iray ho takalon'ny zavatra hitany sy fifanakalozan-kevitra. ny namana izay ankehitriny dia miaina ao ny firenena. Ity dia ahitana bebe kokoa noho ny fiteny maro, anisan'izany ny Eoropeana sy Aziatika. Ny tambajotra sosialy dia tena maimaim-poana. Afaka misoratra anarana ao amin'ny Facebook. Ny fifandraisana atao eo amin'ny sehatra fiadian-kevitra sy ny ao an-chat, dia afaka misafidy ny mpiara-miasa. Ianao atao ny mamaritra ny olona ny taona sy ny vavy, araka izay hita any amin'ny firenena somary miavaka. Izany no loharanon-karena, izay manana foana eo amin'ny toerana, fotoana fohy taorian ny olona teraka anaty aterineto. Azafady hameno ny taratasy fisoratana anarana.
Azonao atao koa ny Manao izany amin'ny namana ny pejy
Azonao atao ny mampiasa ny nifidy ny mpiara-miasa sy mifandray amin'ny Windows. Ny loharano no mahaliana ihany koa ho an'ireo, fa ny mpianatra no tompon'ny teny amin'ny tanànany. Isika dia mampahafantatra Anao ny mikasika rehetra ny endri-javatra fanampiny sy ny olona izay mifandray aminay. Soratra atao ihany koa ny ho fanatsarana eto. Aorian'ny fisoratana anarana, ianao dia afaka mahita fa ny toerana no tompon'ny teny ho an'ny fikarohana haingana. Afaka misafidy ny taona, lahy sy ny vavy, ary ny teny ihany no ho tonga amin'ny faha-hiresaka amin'ny olona hafa. Iray loharano avy hatrany ny fifandraisana manokana ny hafatra tolotra toy ny Skype. Izany no tombontsoa lehibe indrindra. Afaka ny ho afaka amin'ny maro ny fitsipi-pitenenana diso.
Fiteny vahiny amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny tambajotra sosialy vaovao, izay ampiasaina amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny avy eo, mpampiasa.
Ny toerana dia tsara natao ho an'ny beginners izay te-hianatra teny anglisy ao amin'ny antokony, hanitatra ny voambolana sy hanatsarana ny fitsipi-pitenenana. Ankoatra izany, ny loharano mamoaka lahatsoratra sy ifampiresahana amin'ny Forum mpandray anjara nandritra ny fianarana teny Sinoa sy arabo, Koreana sy ny fiteny hafa.
Voasoratra misaraka plus.
Ny service dia manolotra mihoatra ny mavitrika chats mba hiresaka momba ny amin'izao fotoana izao ny mozika, ny fanatanjahan-tena, sy ny zava-mitranga ankehitriny, ary koa ny amin'izao tontolo izao ny olona mba hifandray amin'ny. Izany dia hita ao lehibe Eoropeana sy Aziatika fiteny. Misy ihany koa ny teny voasoratra fa tsy maintsy ho afaka ny fampitana hafatra miaraka amin'ny fahaizany manokana amin'ny sehatra. Ny toerana natao ho an'ny advanced users ny fiteny vahiny. Ny fiaraha-monina tsy afaka manampy anao ihany ny olona miresaka amin'ny hafa sy ho namana manerana izao tontolo izao, fa mety ihany koa ho ny zava-nitranga. Izany fanompoana izany dia tena ilaina mba hahazoana antoka fa ny mpifindra monina. Izany no fiaraha-monina vaovao, ary fantatsika fa tsy afaka ho tena ilaina mba jereo ity asa fanompoana. Izany dia atao ao ny Tsara eny an-tsaha eo amin'ny pejy voalohany, izay afaka mifidy ny interface tsara ny teny: ny teny anglisy, rosiana, espaniola. Afaka misafidy ianao na te hiresaka ihany no mba olon-kafa, na amin'ny lahy sy ny vavy, ny fiteny, na ny fomba fiteny. Ankoatra izany, ny fizarana"forum","hoy ny Tatitry", ny"Fanasana". Dia takiana fifandraisana fisoratana anarana. Ity manaraka ny fifandraisana amin'ny finday fitaovana ho an'ny haino aman-jery sosialy amin'ny chat fandaharana aseho bebe kokoa noho ny teny amin'ny mari-pahaizana momba ny zava-bitany sy ny feo hafatra. Raha tianao, ny fandaharam-potoana dia afaka hanangona ny fiaran-dalamby feo, sns, ary koa ny fianarana zavatra (teny, teny, andian-teny, sary) ao amin'ny fitenin ny database. Any amin'ny faritra ambanivohitra, mbola misy ireo mpampianatra tena izy-efa mpiteny azy ny fametrahana ny teny sy ny fifandraisana. Ity dia tantara marina. Ity tranonkala ity dia hita ao amin'ny tena malaza trano ao, AI (misy an'arivony ny mombamomba sy ny tantara), satria ny mpampianatra izay nanao ny safidy ny fiteny noho ny fianarana any ivelany. Izany no lesona iray amin'ny fotoana. Ity takelaka ity dia ny fampiharana finday.
Ny lahatsary amin'ny chat no ampiasaina mba handoavana ny fifandraisana amin'ny mpampianatra.
Manana tambajotra-na ny olona tsy mihoatra ny firenena. Afaka misoratra anarana ny angon-drakitra momba ny Facebook pejy sy maka ny rindrambaiko ho an'ny finday fitaovana. Haingana check-in. Raha vao mamorona profil, dia afaka avy hatrany manomboka ny fanaovana namana vaovao. Afaka mifandray amin'ny velona amin'ny chat na ny horonan-tsary. ny olona misoratra anarana ao amin'ny site sy handray marina fiteny fifanakalozana, lesona tamin'ny mpampianatra, sy miresaka ny fomba fanao amin'ny tompon'ny teny. Ny"Fifandraisana"faritra ihany koa dia ilaina ny fizarana. Ny fifandraisana atao eo amin'ny bebe kokoa noho ny fiteny maro, anisan'izany ny Eoropeana sy ny arabo.
ነፃ: ማድረግ ይችላሉ አዳዲስ ግምገማዎች ጋር ነፃ ጣቢያዎች
kisendrasendra chat ny lahatsary amin'ny chat online fampitana amin'ny chat roulette zazavavy an-tserasera ho maimaim-poana Mampiaraka maimaim-poana ny mampiaraka toerana mba hitsena ny lehilahy ny lahatsary voalohany fampidirana amin'ny chat roulette an-tserasera avy amin'ny finday maimaim-poana ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny tovovavy taona maimaim-poana video firesahana amin'ny efi-trano an-tserasera ny fampitana ny